नेकपाका नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाट टुंग्यियो, कसलाई कुन जिम्मेवारी ? (सूचीसहित) - Deshko News Deshko News नेकपाका नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाट टुंग्यियो, कसलाई कुन जिम्मेवारी ? (सूचीसहित) - Deshko News
नेकपाका नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाट टुंग्यियो, कसलाई कुन जिम्मेवारी ? (सूचीसहित)
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले ३३ विभाग प्रदेश सहइन्चार्जहरुकोको जिम्मेवारी टुंग्याएको छ । आज बिहान ११ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विभाग र प्रदेश सहइन्चार्जहरुको जिम्मेवारी टुंग्याएको हो । प्रदेश सहइन्चार्जमा २–२ जना थप्ने निर्णय भएको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको स्कूल विभाग प्रमुखमा ईश्वर पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वामदेव गौतम, विदेश विभाग प्रमुखमा माधव नेपालले जिम्मेवारी पाएका छन् ।त्यस्तै प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन् भने नीति प्रतिष्ठान प्रमुख झलनाथ खनाल भएका छन् ।
क–कसले पाए जिम्मेवारी ? तालिकामा हेर्नुहोस्: